Ejypta: Niharan’ny herisetra ilay bilaogera nogadraina ary nasaina hivadika Miozolomana ho takalon’ny famotsorana azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2019 3:51 GMT
Araka ny filazan'ny ANHRI, nanomboka ny adihevitra rehefa nisy tanora Miozolomana niditra tao amin'ny bilaogin'i Hani Karaz Elhob (Tia Vatomamy) ary nahita rohy mankany amin'ny tranonkala iray hafa misy tantara antserasera antsoina hoe “Osin'i Azazil any Lameka” izay ahitana fanafihana ny finoana silamo. Ity tantara ity dia nosoratanà mpanoratra tsy mitonona anarana tamin'ny anarana “Mopera Utah” ary natao ho setrin'ilay tantara malaza “Azazil” nosoratan'i Yusuf Zidane, izay heverin'ny mpandala ny nentin-drazana sasany fa fanafintohinana ny kristianisma. Nihevitra ny tanànan'i Hani fa izy no mpanoratra ny tantara.
Nogadraina tao amin'ny fonjan'i Borg El-Arab tao Alexandria i Nazeer, toerana izay nanagadrana ireo bilaogera toa an-dry Musa'ad Abu Fagr, izay nodarohana tao amin'ny efitry ny fonjany sy i Kareem Amer izay niharan'ny fampijaliana mafy niteraka ratra maromaro ankoatra ny nify tapaka. Nesorina tamin'i Kareem Amer ny zo hitatitra ny tranga sy ny zo handrakitra ireo ratra ireo amin'ny tatitra ara-pitsaboana. Bilaogera roa hafa no voalaza fa nampijaliana tao Borg El-Arab tahaka an'i Kareem El-Beheiry sy Mohammad Maree.